Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain oo ka heshiiyey saxiixa Weeraryahanka reer Brazil ee Neymar Jr – Gool FM
Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain oo ka heshiiyey saxiixa Weeraryahanka reer Brazil ee Neymar Jr
(Paris) 29 Agoosto 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa ka heshiiyey ugu dambeyn saxiixa ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr.
Shabakadda Sky Sport Italia ayaa warinaysa in kooxda reer Spain ee Barca iyo midda reer France ee PSG ay ka heshiiyeen saxiixa Neymar Jr.
Suxufiga aadka loo qadariyo ee Di Marzio, kaasoo ka tirsa Sky Sport Italia ayaa shaaca ka qaaday in labada kooxood ay isla meel dhigeen saxiixa ciyaaryahanka, balse labaduba ma aysan sheegin faahfaahinta heshiiskan.
“Ku laabashada Neymar ee Barcelona waa ay soo dhawaaneysaa, kaddib labo sanadood xiddiga reer Brazil ayaa xiranaya maaliyada Blaugrana, isagoo ka tagaya Paris Saint-Germain, heshiis waa la gaaray, saxiix kaliya ayaa ka harsan.” ayaa lagu yiri war kooban oo la soo dhigay warsidaha Sky Sport Italia.
Warkan ayaa haddii uu run noqdo waxa ay ka dhigan tahay inuu soo dhammaaday warkii ugu weynaa suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, kaasoo ahaa Neymar Jr oo ay ku dagaalayeen Barcelona iyo Real Madrid, haddana waxa uu maray dhinaca Barca.
Wixii wararka oo ka soo kordhaha sheekada Neymar dib ayaad kala socon doontaan.
Liiska xiddigaha xulka qaranka England oo lagu dhawaaqay, xilli Aaron Wan-Bissaka uu helay wicitaankiisii ugu horreeyey ee xulka